Maxkamad ku taalla Britain oo xukun ku riday Somali-Finnish ku biiri lahaa Kooxda Daacish. | Baydhabo Online
Maxkamad ku taalla Britain oo xukun ku riday Somali-Finnish ku biiri lahaa Kooxda Daacish.
Cubayda Xasan Jaamac oo 19 jir ah ayaa lagu soo oogay inuu Kharajka Jaamacadda u isticmaalay inuu ku raaco Diyaarad, si uu ugu biiro Kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Iraq.
Ardaygaasi oo haysta Dhalashadda dalka Finland ayey Boliska Britain waxay bishii Feberaayo ee sannadkii hore soo qabteen isagoo la socday Diyaarad ay leedahay Shirkadda RyanAir flight oo ku sii jeeday caasimadda dalka Romania ee Bukharest.
Hadal ka soo baxay Boliska Britain ayaa lagu sheegay Cubayd Xasan Jaamac inuu ahaa Arday Cilmiga Kombiyuutarada ka barta Jaamacadda Middlesex University, isla markaana ay ku qabteen caddymo badan oo muujinaya inuu qorsheynayey inuu ku biiro Kooxda Daacish.
Boliska Britain waxay guriga Ardaygaasi oo ku yaalla Koonfurta London ka heleen Qoraalo muujinaya qaabka loo sameeyo waxyaabaha qarxa iyo Filimo Video oo ay muujinaya Kooxda Daacish oo dad surka ka jartay ,qalab kale oo loo adeegsan karo in wax lagu dilo iyo Khariidada dalka Turkiga.
Boliska waxay kaloo sheegeen inay heleen Qoraal muujinaya Liiska Shaqo ee uu dooran karo marka uu ku biiro Kooxda Daacish, kuwaasi oo kala ah: Xarun Warbaahin, Kalkaaliye Isbitaal, Makaaniko, Waaxda farsamayso Qaraxyadda, Macallim Madarasadda iyo Boliska Diinta ee Xisbah iyo Tababare Milliteri ee dhinaca Jir-dhiska.
Dhinaca kale, Cubayd Xasan Jaama oo muddo 6 sanno Aabihiisa kula noolaa magaalladda London waxaa lagu xukumay Xabsi dhan 3 sanno iyo bar.